Aanaa Gullisootti barataa Gutuu Abarraa ajjeefamuun polisiin Oromiyaa amane. - Welcome to bilisummaa
Aanaa Gullisootti barataa Gutuu Abarraa ajjeefamuun polisiin Oromiyaa amane.
OMN:Oduu Mudde 03,2015 Godina Wallagga Lixaa aanaaa Gullisoo Magaalaa Calliyaatti Mormii Master pilaanii Finfinnee baratoota bahan keessaa barataan tokko rasaasaan ajjeeffamuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa amane.
Reebichaa fi ajjechaa bakkeewwaan birootti raawwate garuu salphisanii ilaaluun to’anna jala olchuu isaanii himan.
Mormiin Master pilaanii Finfiinnee bifa haaraan Manneen barnootaa fi Yunivarsitoota keessatti torbee darbe irra deebi’e ka’e irratti gama Mootummaa Itoophiyaatiin//hanga ammatti ibsii ifatti osoo hin kennamin kan ture yoo ta’u, har’a garuu to’anna jala ooleera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kenne.
Koomishinarri Koomishinii poolisii Oromiyaa Ibrahim Haajii akka miidiyaalee biyyattitti akka himanitti Yuunivarsitootaa Haromayaa fi Maddaa Walaabuu akkasumas Godiinaalee Shawaa Lixaa fi Wallagga Lixaa keessatti mormii Master pilaanii baratoonni kaasaniin wal qabatee lubbuu namaa fi qabeenyi barbadaa’uu himan.
Roobii kana Godina Wallagga Lixaa aanaaa Gullisoo Magaalaa Calliyaatti Mormii Master pilaanii Finfinnee baratonni bahan irratti barataan tokko ajjeeffamuu Koomishinarri Poolisii Oromiyaa kun amananiiru.
Rakkoon ka’e kunis qamoota misooma biyyatti hin feeneen akka ka’e kan dubbatan Aangawwaan poolisii kun dhaabbiilee barnootaatti fayyadamuun agandaa qaban raawchuu warra barbaadaniin qindaa’e jedhanii jiru.
Mormiin Godina Wallaggaa Lixaatti gahe gaggeesumma farreen nageenyaatiin waan ta’eef naannichatti hojiin ol aantummaa seeraa kabachiisuu itti fufa jechuun sodaachisaniiru.
Haa ta’u malee Mormii torbee tokko oliif itti fufee jiru kanaaf Deebiis ta’e yaada furmaata utuu hin kennin qaammota biraa qofaa balaaleffachuun darbaniiru.
Ajjechaa fi hidhaa humnoota mootummaa meeshaa hidhatanii jiraniin baratoota irartti raawwate eenyu akka itti gaafatamummaa fudhatu waan jedhan hin qaban.
Yunivarsitti Haromayaatti ajjeechaa barata tokkoo irartti raawwatee fi hidhaa raawwachaa jirus utuu hin tuqin darbuun isaanii taajabameera.
Previous Waamicha Hiriiraa Mormii tokkuumma baratoota Oromoo (TBOJ) caayya ABO/OLF biyyaa Jarmanii, Frankfurt
Next Hiika dhabdee Abbaa murtii..